Ayothusi ukuba awunayo, kuba ayizukuba nzima ukuyenza ngokuchwetheza isicatshulwa kwibhodi yezitshixo usebenzisa usasazo olumiselweyo. Kuhlekisa kangakanani ukuthetha kwincoko yevidiyo, ukuthumela iileta zothando ngaphandle kokuphazamisa usasazo lwevidiyo.
Ingxoxo yevidiyo yeRoulette kunye namantombazana kwiminyaka eyi-18 eyadlulayo yathathelwa ingqalelo njengengaqhelekanga. Kuba kwakungekho khamera yewebhu, imakrofoni kwikhompyuter ... Iyavunyelwa kwangoko ukuba iqhubeke nengxoxo njengoko inqwenelwa. Ukuvakalisa umdla kwinqaku-imbali encinci. "Umthetho" wevidiyochat-igama liqhelekile ngoku, kodwa ukhe wacinga ngembali yemvelaphi yegama? Inkcazo ichazwa kukukhululeka kwakhe, nokwakheka komsebenzi ngendlela engaqhelekanga: indibaniselwano yezinto ezinokwenzeka zenziwa kumdlalo oqhelekileyo wamanani afanayo. Akunakulinganiswa, kodwa ngamanye amaxesha kungalindelekanga. Umchasi ukhethwe ngokuzenzekelayo yinkqubo, uqhagamshela kwi-interlocutor engahleliwe. Ukuguqula ubumnandi bakho-yiva olu lonwabo nomphambukeli ovela kwenye indawo, uqonde umahluko kumgama- mhlawumbi ukwilizwekazi elinokwenzeka.Kwaye ubukhulu bamehlo amakhulu - ukubona ummelwane okanye isihlobo eskrinini ... Ihlaya alifani kwaye lilingana ne-1: 100,000 eyahlukileyo yophuhliso lweziganeko. Ngenxa yokuchacha kwayo, ibizwa ngokuba yi "random". Ngokubanzi-ithamsanqa kangakanani, kwezinye izinto, njengomdlalo weklasikhi wenhlanhla. Ukudinwa yile ncoko-qala ukukhangela elandelayo ye-twitter, ukuba awuyithandi-cinezela ukukhangela kwakhona ude ufumane into oyifunayo. Ukuhamba okuqhubela phambili kunye nenkqubo inomdla, ngesiqhelo awukwazi ukuzikrazula. Uhlobo lomdlalo, umlutha kunye nolonwabisayo. Kungokwemvelo ukulahla umkhondo wexesha, ukuba ngokukhawuleza ixesha lokuzonwabisa lihamba njani. Ukhangela izibonelelo apho unakho kwiseto sothando kunye nokusebenzisa okulula- "iprojekthi yobudlelwane nje" -yakho. Incoko yamanye amazwe yinto ethandwayo kakhulu, kunye nokunyuka rhoqo kule minyaka idlulileyo. Yazi umntu,Ukuhlala ngokuchasene nenqaku lehlabathi-ngoku okwenyani, ukudlala ngothando okulula okanye ubuhlobo- kunokufezekiswa ngenxa yoqhakamshelwano lwamanye amazwe. Amava angalibalekiyo, neemvakalelo, kunye nobuzwe obahlukileyo, unokuziva, ukhumbule ubomi bakho bonke. Ukuziqhelanisa nabantu bamanye amazwe ngekhe kumoshe. Iimpawu ezibonakalayo ziya kushiya uphawu olungacimiyo. Kwabaninzi kuya kubakho ingxaki engenakoyiswa - isinxibelelanisi somlamli. Zimbalwa ii-polyglots kwaye kunzima kakhulu ukulwazi ngokugqibeleleyo ulwimi lwamanye amazwe ehlabathi. Ukufumana umntu onokuthetha naye ngumcimbi wemizuzwana emi-2, kodwa ukuqonda ukuba uthini sele kuyingxaki ... Kunyanzelekile ukuba uzichaze kwaye uzichaze. Abathandi beelwimi zasemzini baya kuvuyiswa yindlela engenakuphikiswa, kufuneka uvume. Ewe, okwangoku, masibuyele kwingcambu-ubunzima obukhulu bufuna iintlobo ngencoko, hayi ukuphucula ulwazi lwabo ...kungcono ukusebenzisa ulwazi lwendalo kunye noluthandayo igama lesiRashiya. Incoko yevidiyo yanamhlanje yaseRussia yenzelwe abantu ekujoliswe kubo. Iwebhusayithi efikelelekayo eyilelwe ukuqonda iya kwenza ukuba kube lula ukufumana umntu osebenzise ulwimi olufanayo kwintetho edityanisiweyo njengawe. Ngokwendalo, kule meko, uthethathethwano naye luya kuqhubeka ngaphandle kwemiqobo. Ukuqondana kunye nokwazana okutsha okuthembisayo, ixesha elininzi elichithwe, izihloko ezahlukeneyo- azikuvumeli ukuba udikwe kwincoko oyithandayo yevidiyo, kodwa iya kuzisa uvuyo, ukukhululeka oya kukukhumbula xa ukude kunxibelelwano lwe-Intanethi.Ngokwendalo, kule meko, uthethathethwano naye luya kuqhubeka ngaphandle kwemiqobo. Ukuqondana kunye nokwazana okutsha okuthembisayo, ixesha elininzi elichithwe, izihloko ezahlukeneyo- azikuvumeli ukuba udikwe kwincoko oyithandayo yevidiyo, kodwa iya kuzisa uvuyo, ukukhululeka oya kukukhumbula xa ukude kunxibelelwano lwe-Intanethi.Ngokwendalo, kule meko, uthethathethwano naye luya kuqhubeka ngaphandle kwemiqobo. Ukuqondana kunye nokwazana okutsha okuthembisayo, ixesha elininzi elichithwe, izihloko ezahlukeneyo- azikuvumeli ukuba udikwe kwincoko oyithandayo yevidiyo, kodwa iya kuzisa uvuyo, ukukhululeka oya kukukhumbula xa ukude kunxibelelwano lwe-Intanethi.
Sithanda ukutsala umdla wakho kweyona ncoko yevidiyo idumileyo, etyelelweyo ye-Intanethi yeRussia- incoko yeeroulette. Ixesha elichithwe kamnandi, kunye nomgangatho ophezulu wenkonzo yesiza, iya kukuvumela ukuba uzive ungumntu othandekayo kakhulu, oyimfuneko emhlabeni. Abahlobo abatsha baya kukuvuyela ukukubona kwakhona kusasazo lwevidiyo, buqu. Musa ukulahla amanyathelo okhuseleko entlokweni yakho. Musa ukuthemba abantu ongabaziyo. Ngokuphathelene nenkonzo, siyavuya ukukubona kwaye sikuncede ukusombulula nayiphi na ingxaki ngokubhekisele ekusebenzeni kwenkonzo.
Ukuthintela ukungaphumeleli kokumiliselwa okungathandekiyo kubukho beentlobo ngeenjongo ezimbi - ukuqala unxibelelwano, ngaphambi kokusebenzisa incoko yevidiyo-yenze ubhaliso olulula. Ayizukuthatha ixesha elininzi, ungakhathazeki. Ngokuchasene noko, iya kwenza lula inkqubo yokuthandana kunye nonxibelelwano. Ungayikholelwa - ke qhubeka uyilo ngoku ukuze uqiniseke.
I-roulette yengxoxo yevidiyo-intuthuzelo kunye nokunxibelelana okufanelekileyo kunye nobuncinci bezenzo zabantu abanxibelelana nayo. Unesakhono sokubhala imiyalezo, iyabonwabisa abalandeli bezentlalo. uthungelwano okanye imbalelwano ye-ICQ kunye ne-Skype. Ngokomgaqo, abantu abaninzi baqaphela enye into engabalulekanga kunye nethuba elifanelekileyo lokugcina imbali yomyalezo. Emva kokungabikho ixesha elide- "uya ngaphaya" kwincoko kwaye ukhumbule into obuthethe ngayo okokugqibela ngombhalisi othile.
Iingcali zizamile ukuphakamisa amanqaku asebenzayo oovimba kwinqanaba elifanelekileyo, ukwenza ukwazana okungahleliwe ngokongeza umsebenzisi kuluhlu lwabahlobo (ukuba ngenene unalo uhlobo oluthile lovelwano kumngeneleli kwaye waziva unomnqweno wokuqhuba incoko ngokuphindaphindiweyo okanye ngokulula awufuni ukulahlekelwa ngumnxeba nomntu). Kule meko, kuyaqala ukufumanisa ukuba umntu obhalisileyo uza kuphinda anxibelelane nini ukuze aqhubeke nonxibelelwano naye. Ngokufanayo, njengakwiiprojekthi zentlalo - sinethuba lokutshintshana ngezipho. Into efunekayo kukuthenga iingqekembe ezibonakalayo. Ukubonakalisa uthando ngale ndlela sesona senzo siphakamileyo, kwimeko emxinwa. Asinguye wonke umntu onokwenza isipho kumthengi wengxoxo yevidiyo, kuba ayinguye wonke umntu okwaziyo ukuba nesisa, kwaye ilungelo elinjalo liyamkholisa lowo unikwe esi sipho. Ukunyaniseka kweemvakaleloSiyavuyisana nomsitho obalulekileyo okanye ukwenza nje ukuba wonwabe.
Umyalezo wevidiyo orekhodwe kwisango uya kuba yindlela engaqhelekanga. Olu luhlobo lwevidiyo avatar apho uzazisa khona, uxelele kancinci ngawe, unomdla kumbukeli we "avator yevidiyo". Veza iimvakalelo zakho, ungathandabuzi ukuxelela ikhamera malunga nobubi kunye nobubi bakho, malunga neemfuno ezinqwenelekayo ekufuneka zibekho kwiqabane lakho lobomi. Okanye uzibonakalise.
Ekuqaleni (esele kukhankanyiwe apha ngasentla) - kwacetyiswa ukuba kubhaliswe. Umsebenzi ukuza kunye nokubhala kwicandelo elichaziweyo "isiteketiso" - igama elikwingxoxo, abanokuthi babone ngalo. Akukho mfuneko yokuba ubhale igama lakho kunye nefani - kwanele ukuza negama elihlekisayo, igama osele uphupha ngalo, isiteketiso sesilwanyana osithandayo - ngokubanzi, esifundekayo. Kwaye isiteketiso sokuqala nesingalibalekiyo sisiqinisekiso sokuba awuyi kulityalwa kwaye ufumaneke emva kwethuba. Kwisiza-unokungaziwa ngokupheleleyo kwaye ungakhathazeki kwi-roulette yengxoxo yevidiyo.
Awuyithandi imbonakalo ye-interface? Ngokuzimeleyo useta useto lomboniso wangaphandle, umbala we-gamut, khetha loo mibala uyifunayo, ungaphazamisi. Ulwimi kunye nokuboniswa kwayo kungasetwa ngokuthanda, basebenzisa isiRashiya, kodwa ukhetho lusezandleni zakho, njengoko besitsho. Sebenzisa incoko yevidiyo engahleliwe kuya kuzisa uvuyo oluphezulu, ukuba uhlala kwindawo oyifunayo kwaye ukhululekile!
Indlela ebalulekileyo yokuvavanya nayiphi na inkqubo okanye iprojekthi ngumgangatho woyilo kunye nokubhala kwabo. Ngamanye amagama, kulawulo olululo lwenkqubo, kufuneka ukuba yenziwe ngokugqibeleleyo. Kwaye musa ukulibala ukuba abathengi abatyelela oovimba - kufuneka uzidlule iingxaki kunye nokusilela okwenzekayo, kungcono ngakumbi ukuthintela ukwenzeka kwazo. Ngokuthe ngqo i-roulette yethu yengxoxo yevidiyo ikhuselekile ngokupheleleyo kunye nesoftware yanamhlanje yokulwa intsholongwane, engayi kuvumela ukophula inkqubo yethu. Ubhaliso olunyanzelekileyo-abantu abathandabuzekayo abaneengcinga ezimbi-yinto ecekisekayo. Ababonisi umnqweno wokuchitha kwaye bashiye iphepha, ngaloo ndlela beshiya ingxoxo yevidiyo ukuze bafumane "inzuzo" elula. 99% ukuze uphumle kwindawo ekhuselekileyo kwaye uzinikele ekufumaneni okuhle. Unobtrusivenessukuthandana kunye nogqibeleleyo imo - oku kunyango nesizungu ukuba sinike iindwendwe zethu.
Xa kudluliswa inkqubo, iindwendwe ziqinisekisa isivumelwano kunye nemithetho yomsebenzisi. Ukuba uyavumelana nesivumelwano, oko kuthetha ukuba uyavuma ukuba uziphathe kakuhle kwaye uziphendulele ngezenzo zakho, ube nengqiqo ngokuhambelana nayo yonke imigaqo yokuziphatha. Ukusuka kwicala lethu-siqinisekisa ukugcinwa kwemfihlo kolwazi oluchazayo. Ikwaluxanduva lwethu ukuqinisekisa intuthuzelo yengxoxo yethu yevidiyo.
Sifuna ukukholisa abantu abasingqongileyo. "Iya kunika ntoni?" - umntu uya kubuza. Impendulo ilula: iya kunceda ekufumaneni umsebenzi, ufumane abalinganiswa abamangalisayo abaya kuba ngabahlobo kunye nabahlobo ngenxa yeencoko; akukho mntu ukhuselweyo "ngesiquphe entliziyweni" ngequbuliso, kuba isiqingatha sesibini siza kudibana nathi - ewe, sele zikhona iimeko ezinjalo, siza kuchaza amabali ambalwa apha ngezantsi - ukubonisa imizekelo yobomi. Qhuba incoko ngobuchule, zama ukumamela kwaye uve ", uncume kwaye uphendule ngobubele kulowo unxibelelana naye. Awu, ayinguye wonke umntu oziphethe kakuhle kwezi meko ... kufuneka wenze ntoni? Ungamkholisa njani? Impendulo: ukuziqhelanisa nokwenza ngakumbi!
Uya kuqonda ukuba uluvakalise nini uluvo okanye, ngokuchaseneyo, ukuthula.
2) Ngokuchasene noko, uyathetha kakhulu? Ngaba abantu obaqhelileyo bayangcikiva okanye bayabaphepha abahlobo? "Amagama okwahlula": Yima kancinci kwiingxoxo, funda ukuba nomdla kwiziganeko zabakhweli. Mamela, buza imibuzo-ngaloo ndlela ubenze bathethe. Abantu abakungqongileyo babizelwe ukuba baqonde ukuba unomdla kwaye awukhathali kubo. Abathandi ukuxelela into, bangamameli. Ukuba akukho manyathelo athatyathwayo-ngumphulaphuli kuphela oya kuba ngu-Ewe-wena ngokwakho.
3) "Imiyalelo" -ukuxilongwa emhlabeni ... Xa kunye okanye ngaphandle kwesizathu-bonisa. Ndikholelwe - uninzi "luyacaphukisa". Wonke umntu unentloko yakhe kwaye akasasazi ingcebiso. Awuqapheli, kodwa ulala ngeengcebiso ezixabisekileyo. "Ingcebiso": Cwangcisa injongo: ukuba ucebisa umntu, kuya kuphela xa kufuneka njalo, ukuba umchasi ngokwakhe ubuza. Ke baya kuyixabisa-ngandlela zonke!
Siqinisekile ukuba akukho mntu ucinga malunga neendleko zokugcina iserver kunye nezinye izixhobo xa ukhuphela isoftware. Ndifuna izingxoxo zevidiyo ukuba zingabahlawulisi. Kodwa khawufane ucinge - isigidi sabantu banxibelelana nezixhobo, baya kusebenza ngaphandle kweziphazamiso, ngomgangatho ophezulu. Uncedo olukhulu lwencoko yevidiyo yinkululeko yokusebenzisa, esibonelela ngayo. Zininzi izibuko zokuthandana, zonke iintlobo zeengxoxo, iiforamu, kodwa kuya kufuneka uhlawule. Umzekelo, ukuhambisa imali ngentlawulo ye-elektroniki okanye ukuthumela iSMS, kodwa nokuba ujongeka kanjani, le yinyani. Ngoku makhe siqwalasele umnikelo wethu-unikwa ingxoxo yasimahla yevidiyo ekumgangatho ophezulu! Awudingi ukwenza nayiphi na intlawulo ngexesha lakho lobuqu. Ukuzonwabisa okuzonwabisa, okuhamba kunye, ngaphandle kotyalo mali.
Ukufumana ukwamkelwa ngokubanzi kwi-Intanethi. I-roulette yengxoxo yevidiyo yazisa ngemisebenzi, iphucula inkqubo-ukuze kube lula. Imithombo yolwazi ifunwa mihla le ngabahlali belizwe elikhulu (lilonke, ngaphezulu kwamanani ezigidi)! Inani labantu ababhalisiweyo liyanda mihla le. Ukuba uya mihla le, ungadibana nobuso obutsha kunye nobutsha! Uya kudibana nabantu abacinga ngokufanayo abakuxhasayo kunye noluvo lwakho; kuya kufuneka uxoxe ngezinto ezinomdla neziphikisanayo nabo. Uthini umxholo wengxoxo yevidiyo? Ewe, akukho namnye! Ukufumana izihloko ezahlukeneyo kukudibanisa. Akukho zithintelo kumthamo wemiyalezo ebhaliweyo kunye nokuqhelaniswa nolwimi, akukho khowudi yokunxiba okanye eminye imigaqo iyafuneka. Khululeka kwaye ube nguwe, dibana kwaye wonwabe. Ingcebiso yethu kuwe yeyokufunda nokubhala. Ukuthetha ngendlela efanayo nenyani, imithetho yencoko yababini iyafana kuyo yonke indawo:I-erudition, imfundo, intetho ehanjiswe ngokuchanekileyo-yiloo nto exatyiswe ngaphezu kwako konke. Emva kokuzibonakalisa njengomntu obalaseleyo kwaye obalaseleyo, bonisa isidalwa esinyanisekileyo nesivulekileyo, sikwenza kucace ukuba awukruquki ekuthetheni naye. Yandisa ingxoxo yakho yevidiyo. Kodwa eyona nto iphambili ihlala-ayikokuzenza ngathi lolunye uhlobo, ukuze ube nguwe.
Sebenzisa incoko yevidiyo, uzive uqeqesho kuchanekileyo "indlela yokuziphatha eluntwini". Ngokwenyani, ungumntu oneentloni kwaye uyathandabuza ukuzibonakalisa, sele uyiqhelile. Ukuba usebenzisa indawo yethu kunye nokufikeleleka kwayo ngokupheleleyo, unokuziqeqesha ngokulula kwizakhono zokuthandana, uqonde umgaqo wokuziphatha nabantu abangaziwayo. Amava angenakubekwa endaweni anokusebenza njenge "sifundo" esimangalisayo kubantu obaziyo. Ngokwengqondo uya kuba ukulungele ukujongana nobunzima oboyisileyo kwinqanaba lokuziphatha- akusayi kubakho miqobo. Ukuziqhelanisa kulungile kumntu. Kwaye ayizukuba yinkqubo yokufunda kuphela, kodwa kuya kuba mnandi ukuchitha ixesha lokuzonwabisa kwinkampani eyonwabisayo. Ukuncokola nabantu abalungileyo kuya kukwenza uzive wonwabile, wonwabe kunye nezibonelelo zonxibelelwano. Ukuthetha kwincoko yevidiyo-uya kuba nethuba lokubaleka kumaxhala emihla ngemihla,esele zidika.
Unxibelelwano lwe-Intanethi lubonelela ngethuba lokuthetha ngokwakho, ngokupheleleyo. Ibali malunga nawe kunye nobomi obunomdla - uya kulahla i-ankile yesithukuthezi emphefumlweni. Naliphi na ibali-liya kuphulaphulwa ngomdla, kwaye uxelele abalinganiswa abahlaziyiweyo-uya kugcina ukujonga okuphefumlelweyo ngalo lonke ixesha. Yabelana ngengxaki yakho, cela isikhokelo, cela inkxaso yokuziphatha - kwaye uyakuziva ushushu (ukuba uyathemba, ewe). Kungcono "ukuthulula umphefumlo" kumlinganiswa ongaqhelananga, ukuba kude - nto leyo imangalisayo. Awunatyala nabani. Kodwa nceda ungalibali ukuba kukho isikhokelo esithile sokuthembana. Konke okufanayo - awuqhelekanga kwaphela, nangayiphi na imeko, ufuna ukumazi kakuhle.
Ihlala isenzeka ngoluhlobo: abantu bafumana iqabane lomphefumlo kuthungelwano lwe-elektroniki. Imizekelo emininzi, xa into ethile yavela ngempumelelo kwi-Intanethi phakathi kwabasebenzisi, yajika yaba ziintlanganiso ngokwenyani. Obo budlelwane bunomthetho ekuphela kwendlela: ukuqhubeka, ukubandakanyeka kwaye ekugqibeleni - umtshato. Ngaphezulu kwamakhulu amawaka eentsapho emhlabeni ezikhoyo ngenxa yetekhnoloji entsha. Wonke umntu unokuthandana esebenzisa indawo yokuthandana, iqonga okanye ingxoxo yevidiyo njengezixhobo eziphuculweyo. Ukuba uziva unesithukuthezi, sukumisa ixesha lokwenza de kube ngomso - kholelwa kubuchule bakho, sondela kakhulu ekufuneni iqabane / iqabane. Siza kunceda nangayiphi na indlela esinakho ngayo; ungasebenzisa ngokupheleleyo indawo yethu. I-roulette yengxoxo yenzelwe usuku oluqhelekileyo, ubusuku kunye nokukhangela (satsho ngaphambili-kunokubakho abantu abalungileyo abafana, abahlobo).La asingomagama nje, ndikholelwe, yonke into iyinyani! Ithuba lelona themba likhulu! Ukuqala kobomi obutsha kunye naleyo uyithandayo akukhutshelwa ngaphandle- ngaba uya kuba ngumsebenzisi wengxoxo yevidiyo eyaziwayo yolwimi lwaseRussia okanye hayi? Kusenokwenzeka ukuba undwendwe olunje ululolo njengawe kwaye ungazithembi emehlweni akhe - uzalisa amasimi kwiphepha lemibuzo, ngethemba lokuhlangana nomoya wohlobo, iintlantsi ziya kuvela emehlweni akhe, kuyakubakho intsingiselo eyongezelelweyo kuthando ngokwakho ihlabathi. Into ephambili kukuba ungasitshisi isandla sakho ngegama elingenangqondo: "oku akwenzeki" - uyazi? Vavanya ikamva lakho lokwenyani. Eyona nto inokwenzeka, ekubeni wenze inyathelo lokuya phambili, ikamva liya kuza kuwe kunye neqela elilungileyo leprojekthi yethu liza kuphakamisa iglasi yewayini emnandi, eswiti, ekhanyayo emhlophe yempilo entle, intlalontle yosapho ...Ukuqala kobomi obutsha kunye naleyo uyithandayo akukhutshelwa ngaphandle- ngaba uya kuba ngumsebenzisi wengxoxo yevidiyo eyaziwayo yolwimi lwaseRussia okanye hayi? Kusenokwenzeka ukuba undwendwe olunje ululolo njengawe kwaye ungazithembi emehlweni akhe - uzalisa amasimi kwiphepha lemibuzo, ngethemba lokuhlangana nomoya wohlobo, iintlantsi ziya kuvela emehlweni akhe, kuyakubakho intsingiselo eyongezelelweyo kuthando ngokwakho ihlabathi. Into ephambili kukuba ungasitshisi isandla sakho ngegama elingenangqondo: "oku akwenzeki" - uyazi? Vavanya ikamva lakho lokwenyani. Eyona nto inokwenzeka, ekubeni wenze inyathelo lokuya phambili, ikamva liya kuza kuwe kunye neqela elilungileyo leprojekthi yethu liza kuphakamisa iglasi yewayini emnandi, eswiti, ekhanyayo emhlophe yempilo entle, intlalontle yosapho ...Ukuqala kobomi obutsha kunye naleyo uyithandayo akukhutshelwa ngaphandle- ngaba uya kuba ngumsebenzisi wengxoxo yevidiyo eyaziwayo yolwimi lwaseRussia okanye hayi? Kusenokwenzeka ukuba undwendwe olunje ululolo njengawe kwaye ungazithembi emehlweni akhe - uzalisa amasimi kwiphepha lemibuzo, ngethemba lokuhlangana nomoya wohlobo, iintlantsi ziya kuvela emehlweni akhe, kuyakubakho intsingiselo eyongezelelweyo kuthando ngokwakho ihlabathi. Into ephambili kukuba ungasitshisi isandla sakho ngegama elingenangqondo: "oku akwenzeki" - uyazi? Vavanya ikamva lakho lokwenyani. Eyona nto inokwenzeka, ekubeni wenze inyathelo lokuya phambili, ikamva liya kuza kuwe kunye neqela elilungileyo leprojekthi yethu liza kuphakamisa iglasi yewayini emnandi, eswiti, ekhazimlayo emhlophe yempilo entle, intlalontle yosapho ...ukuba undwendwe olunje ulolo njengawe ngokungazithembi emehlweni akhe - kugcwalisa amasimi kwiphepha lemibuzo, ngethemba lokudibana nomoya wohlobo, iintlantsi ziya kuvela emehlweni akhe, kuyakubakho intsingiselo eyongezelelweyo yokuzithanda ihlabathi. Into ephambili kukuba ungasitshisi isandla sakho ngegama elingenangqondo: "oku akwenzeki" - uyazi? Vavanya ikamva lakho lokwenyani. Eyona nto inokwenzeka, ekubeni wenze inyathelo lokuya phambili, ikamva liya kuza kuwe kunye neqela elilungileyo leprojekthi yethu liza kuphakamisa iglasi yewayini emnandi, eswiti, ekhazimlayo emhlophe yempilo entle, intlalontle yosapho ...ukuba undwendwe olunje ulolo njengawe ngokungazithembi emehlweni akhe - kugcwalisa amasimi kwiphepha lemibuzo, ngethemba lokudibana nomoya wohlobo, iintlantsi ziya kuvela emehlweni akhe, kuyakubakho intsingiselo eyongezelelweyo yokuzithanda ihlabathi. Into ephambili kukuba ungasitshisi isandla sakho ngegama elingenangqondo: "oku akwenzeki" - uyazi? Vavanya ikamva lakho lokwenyani. Eyona nto inokwenzeka, ekubeni wenze inyathelo lokuya phambili, ikamva liya kuza kuwe kunye neqela elilungileyo leprojekthi yethu liza kuphakamisa iglasi yewayini emnandi, eswiti, ekhazimlayo emhlophe yempilo entle, intlalontle yosapho ...Isiphelo siza kuza kuwe kunye neqela elilungileyo leprojekthi yethu liza kuphakamisa iglasi yesiselo esimnandi, esimnandi, esimhlophe esimhlophe sempilo, impilo-ntle kusapho ...Isiphelo siza kuza kuwe kunye neqela elilungileyo leprojekthi yethu liza kuphakamisa iglasi yesiselo esimnandi, esimnandi, esimhlophe esimhlophe sempilo, impilo-ntle kusapho ...
Ukuchitha ixesha lokuzonwabisa ngale ndlela emva kosuku olunzima olupheleleyo lweemvakalelo kubhetele kunokujonga isilingi entle kwaye ungazi ukuba wenzeni ngelixa uyadika. Unethuba elihle lokudibana nabantu abathandekayo, abathandekayo ngaphandle kokushiya indlu yakho. Isimo esibi, esibi, akukho mandla okuhamba ngaphandle, kodwa umphefumlo kufuneka uyiyeke, uphumle ... Kwaye esitratweni kukho imozulu embi, i-slush, imvula, ubushushu ... ukhetho olunokuzama-mhlawumbi uye kulala okanye uvule iwebhusayithi yethu ngokucofa kabini imouse. Ukunxibelelana, yenza abahlobo abatsha, eyona nto ibalulekileyo ayikokuhlala ulilize ngaphakathi kweendonga ezine, uchitha ixesha lakho kwi-tube yeTV, obukela kuyo yonke imizuzu yasimahla. Iya kuba ntle kwaye inika umdla phantse kwasekuqaleni - uya kubona ukubonakala kwabahlobo bakho bangaphandle. Baza kucinga ukuba bayathandana okanye utshintsho olukhulukodwa akukho mntu unokuxela ukuba bantywiliselwe kwi-Intanethi. Kwiminyaka nje embalwa edlulileyo- Khange ucinge ngesithembiso sokudibana. Ungalwenza njani unxibelelwano nabantu bamanye amazwe ngokusebenzisa amakhulu amawaka eekhilomitha, ngelixa ubonana? Ngaphandle kokushiya indlu yakho-ungonwabela ixesha lakho usebenzisa ingxoxo yevidiyo engahleliwe.
Ngendlela, andikhumbuli nokuba sithathe isigqibo sokugxila kule ndlela. Awulishiyi ikhaya lakho. Singacebisa ukuxoxa ngevidiyo ngokuzithemba, inkathalo kunye nokuzingisa! Azikho ezinye iindleko ezikhoyo zendlela okanye zeefizi, ubuncinci bexesha, umgudu, amandla - ezandleni zakho. Emva kokuzivocavoca, udiniwe kukungayi ndawo, kodwa kummandla wakho, xa iifom ezithandekayo, ezithandekayo, ezithandekayo ziya kutsala abantu kwelinye icala lesikrini-sele uyibonile, akunjalo? I-interlocutor iyayithanda indlela umhlobo owakhiwe kakuhle ancuma ngayo kwikhamera. Akukho mntu uya kuqaphela ukuba uyaqhwalela ngomlenze omnye, okanye ukhuphe umsipha ... Khange usele ikofu. Ubushushu? Kunzima ukuthelekelela. Akukho mntu uya kuba nakho ukosulela. Ngapha koko, oku kuyimpumelelo kwihlabathi! Dibana kwaye wonwabe ngokungenangqondo!
Indawo okuyo ngoku iphuhliswe nguVideoruletka, kwaye isicelo yindawo ye-Incorporated yiBadanga Limited., Umnxeba. +66865819983. Le femu inkulu inamava, abaqeqeshiweyo abaqeqeshiweyo kwicandelo lobuchwepheshe be-Intanethi kunye nesoftware (eguqulelwe kulwimi lwenkqubo: isoftware). Ixabiso eliyinyani lenziwe ngabasebenzi, ubuchule, ulwazi lweshishini labo - musa ukushiya abantu bengenamsebenzi ngomsebenzi wabo. Enkosi ngomsebenzi onzima, iinzame-namhlanje singonwabela ukusebenza komgangatho ophezulu wesicelo: ividiyo yevidiyo. Umnqweno wokuphucula inkonzo yabathengi uya kuqatshelwa. Umsebenzi wenziwa yonke imihla, utshintsho lubonakala rhoqo kwiinyanga ezi-2-3. Ukuba, xa ukhetha ukwahlulahlula ulonwabo, amehlo akho awile kwingxoxo yethu yevidiyo, uyawuqonda umgangatho ophezulu wenkonzo, ukusebenziseka ngokulula.Umsebenzi wethu unika isiqinisekiso sokuba uya kusebenzisa kuphela iinkonzo ezikumgangatho ophezulu, ukubeka esweni inkqubo esebenzayo kakhulu yesiza kunye noncedo olusebenzayo. IVideoruletka-ngubani okhathalele malunga nomfanekiso wabo kunye nokubonakala kweendwendwe zabo. Qiniseka ukuba usebenzisa kuphela iinkonzo ezisemgangathweni eziqinisekileyo ezivela kubaphuhlisi abathembekileyo abathobela isivumelwano somsebenzisi.ukuthobela isivumelwano somsebenzisi.ukuthobela isivumelwano somsebenzisi.
Ngaba ujonge indlela ekhawulezayo yokudibana nentombazana entle kwaye entle? Incoko yeWebhu yengxoxo yeCoMeet (inguqulelo yesiNgesi yeCooMeet) ikuvumela ukuba unxibelelane nabasetyhini abavela kumazwe ahlukeneyo ngaphandle kokushiya ikhaya lakho. Unxibelelwano olukhawulezileyo, umnxeba wevidiyo ekumgangatho ophezulu, akukho xinzelelo kwaye ngabona banxibelelanisi bangcono abaya kuhlala bedibana ngoncumo.
Siyazi ukuba lixesha elibaluleke kangakanani namhlanje: sisoloko sinyanzelwa ukuba sibeke phambili, sigcine kwaye singxame, kwaye asinalo ixesha lokwenza konke ebesikucebisile. Kule ngxuba kaxaka, ukuthandana kunye nobudlelwane zihlala zibuyela umva ngasemva. Iwebhusayithi esemthethweni yaseKumit iqinisekisa unxibelelwano olukumgangatho ophezulu kuphela kunye namantombazana aqinisekisiweyo- iintlanganiso ezikwi-Intanethi, abantu obaqhelileyo kunye nomoya omkhulu.
Ukucofa nje okukodwa kunye nenkqubo yokudibanisa ekrelekrele iya kukuqhagamshela nomnye wamawaka wabantu ongabaziyo abathandekayo. Qiniseka, onke amantombazana eze apha ukudibana, ukunxibelelana nokwakha ubudlelwane. Ayikho enye inkonzo yasimahla enokunika inqanaba eliphezulu lenkonzo njengengxoxo yeQMIT:
isohlwayo esifanelekileyo kuko konke ukwaphula imigaqo yengxoxo yeeroulette;
Wonke umntu onomdla kwii-roulettes ezikwi-Intanethi mhlawumbi uyazikhumbula ezo ngxoxo bezimi kwimvelaphi yonxibelelwano olungacwangciswanga. Ezi yayizi-Omegl kunye neChatRulet, eyavela kwakhona ngo-2009. Umntu wokuqala weza kuthi evela phesheya, okwesibini yingqondo yomfundi wesikolo saseRussia uAndrey Ternovsky.
Zombini ii-webchats zazisekwe kumgaqo ofanayo: unxibelelwano nabangeneleli abangahleliyo abavela kwihlabathi liphela. Kwaye nangona u-Omegle wayenesiqalo sentloko kwiinyanga ezininzi, yayiyi-ChatRoulette eyayilawula umboniso ixesha elide. Nangona kunjalo, zombini ezi ngxoxo zigqibile ukujongana "nesifo" esinye, esisengxaki kwaye siyadimaza abaninzi ukuba bangazisebenzisi.
Oku kunjalo, umxholo ongalunganga. Kwilizwe elifanelekileyo, abantu abanobuhlobo nabanobuhlobo kufuneka bangene kwi-roulette yevidiyo, abafuna ukudibana, ukunxibelelana, kunye nokubonisana. Inyaniso:
Unxibelelwano olulandelayo luya kunika ithuba lokonwabela umfanekiso okanye ividiyo emileyo kunye nomxholo wentengiso nje kuphela. Ewe, abantu be-PR abanakuyikhanyela into emnandi.
Ngaba usathandabuza? Qhagamshela simahla kwaye uqalise ukuncokola namantombazana kwingxoxo yethu yevidiyo engahleliwe ngoku ngaphandle kokubhalisa nokugcwalisa iprofayili. Ufuna kuphela ikhamera yewebhu ukuqala ingxoxo yevidiyo yeQMIT. Kwaye ukuba ngequbuliso unxibelelanisi akayondlela yakho - tshintshela kumntu ongamaziyo ngokucinezela iqhosha elinye. Amantombazana avela kwihlabathi lonke sele elinde wena!